ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ္း:အခမဲ့စာရင္းသြင္းရန္
ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ယနေ့အချိန်တွင်!
ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo များကဲ့သို့ထင်ရစေခြင်းငှါအနည်းငယ်ထူးဆန်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်လိင်ဂိမ်းကစားတယ်၊ဒါပေမယ့်ထွက်လှည့်အဘို့အဝယ်လိုအားအတွက်အကြောင်းအရာဤအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးမင်းအတွက်ကြီးမားသော! ကျနော်တို့ရိုးသားပါလိမ့်မယ်ကနေရသွား:ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူးအများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏ယိုနှင့်ကျနော်တို့ဟာအများအားဖြင့်ကိုယ့်အသင်း၏၃-၅ သောသူယောက်ျားတွေအပေါ်လုပ်ကိုင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက် ၃၀ နာရီတစ်ပါတ်လုံးပေါင်းစပ်။ ငါပြုချင်ကြပါဘူးကြောင်းတူသံကွဲကျွန်တော်တို့ကို၊ဒါပေမယ့်ပုံကပိုအရေးကြီးအမှန်တရားထက်အချို့တစ်ဝက်-assed စိုက္တယ္။, အခါအားလုံးကပြောပါတယ်၊ပြုပြီး၊ကျွန်တော်တို့တွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖန်တီးအလွန်ကြီးစွာသောလိင်ဂိမ်းများ–တွေလို့ကျွန်တော်တို့တွေးထင်တော်တော်အများကြီးကိုရှာဖွေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်း။ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ၾကည့္ရႈသည္အဲဒီဇာတ်ကောင်များအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု–နှင့်ဆုကြေးငွေအများကြီးခ််ိန္ညႇ်ိခ်က္–ကိုယ့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး! မသာပါကအမြူးဘွယ်ဖြစ်သော၊ဒါပေမယ့်လည်းနည်းနည်းၡမ်ား။ အဆိုပါယင်းလးအဖြစ်ရှုမြင်လိင်သင်္ကေတနှင့်ကြည့်ရှုမည်သည့်အုပ်ချုပ် ၃၄ မော်ကွန်းပြသပါလိမ့်မယ်သင်သည်ဤသည်အလွန်ကြီးသောအမှုပင်။, ယခုအခါ–ပြောပါရစေအားလုံးကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်းများနှင့်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ အောက်တွင်ဖတ်ပါ:ငါပဲဖိတ်ပြီးသင်ပြတာလူးမြည်းအတွက်ဤနယ်ပယ်။
တည်းခိုမူရင်းမှစစ်မှန်တဲ့အနုပညာလက်စတိုင်၏ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းအတွက်။ ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လျှင်သင်အပြေးဤအမျိုးအစား၊သင်ရှိသည်သောသေချာစေရန်အကောင်းကြည့်။ သူလိုလားအပ်နှံဖို့အများ၏ယုံကြည်ကြည့်ရှုပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကယ့်ကိုမကြည့်ကဲ့သို့ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo? ပြားကြိုးစားမှုပြီးနောက်မှာဆိုတော့အမြင်မှန်တယ်၊ကျနော်တို့နောက်ဆုံးအခြေချအပေါ်စွယ်စုံကျမ်းဖစ္ၿသောကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုရဂန္၊ညျကာတွန်းခံစားရ။ ကမယုံသို့မဟုတ်မ၊ကာတွန်းခဲ့တကယ်တော့အခက်ခဲဆုံးအဆင့်ကျွန်မတို့အတွက်စောင့်စေခြင်းငှာလိုအပ်ရိုးရှင်းပြီးယုံပါ။, သူမည်သူမဆိုရဲ့တစ်ဖြီးနှင့်အတူတစ်ဦးနှစ်ဦး-----ညမ်းဂိမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးပြက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမမှန်ပါဘူးကစား။ အဆိုပါကောင်းသောသတင်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အယူအလောင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတာပေးခြင်းသင်လက်လှမ်းလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ထပ်မံအကြောင်း၊ကျွန်တော်တို့အစဉ်အမြဲလိမ့်မည်! မှန်တယ်၊လူတွေကို:ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀%အခမဲ့ဦးတည်သောပူးပေါင်းနိုင်ဘဲတက်ချောင်းဆိုးမဆိုငွေသား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းကိုလုံးဝထောက်ခံအားဖြင့်လှူဒါန်းမှုများကို၊ကြော်ငြာများကို(အလွန်အနည်းဆုံး၊ကျနော်တို့တိ!)နှင့် microtransactions စေသင့်ရဲ့ဂိမ်းအနည်းငယ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသို့မဟုတ်ထူးခြားသော။, အဘယ်သူမျှမအကြောင်းဖြတ်ခဲ့သူအဆုံးသတ်:သငျသညျနေဆဲအပြည့်အဝဂိမ်း၊သင်ကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်။ ဒါကြောင့်အင်း–လာချက်ချင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အနုပညာချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်လုံးဝစိတ်ကူး!
အဘယ်သူမျှမအမှန်တကယ်လိုလားဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမဟုတ်လျှင်လုံးဝရန်ရှိသည်၊မှန်သော? သည့်အခါအထူးသဖြင့်လာတဲ့ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်။ ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ယုံကြည်စိတ်ချမှာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအလွန်ကြီးစွာသောညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ၊ကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်းများအလုပ်လုပ်တိုင်းတစ်ခုတည်း၎င်း၏ဂိမ်းများအားဖြင့်ရာက္ဇာ။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါ၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ–အစားအစာရှိခြင်း၏အသုံးချမှအမြန်ဆုံးသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှတူ၊သင်ရုံကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှတဆင့်သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရာက္ဇာအစားအ!, ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ထောက်ခံမှုအရှု၊အဝတ်အစား၊ဒါပေမယ့်အားလုံးနီးပါးဘြတ္ကြောင်းအတန်ငယ်မကြာသေးခင််လုပ်ရုံတိျေၾကာင္း ၁၀၀%အာမခံချက်လိမ့်မည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ရာက္ဇာချဉ်းကပ်၊ကျနော်တို့လည်းဂရုစိုက်၏ချွေတာသင့်ရဲ့ဂိမ်းပြည်နယ်၊အောင်မြင်တိုးတက်မှုနှင့်တော့။ ဒါကြောင့်လည်းဆိုလိုကြောင်းသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အားဖြင့် incognito ည့္ခပြီးပြီတယောက်မျှမသိတာအထိ–ကြိုးစားလုပ်နေတယ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အကောင့်ကို! တဦးတည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဤအရာက္ဇာနည်းလမ်းအကြောင်းသင်ခေါင်းစဉ်အပေါ်ဤနေရာတွင်သင့်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်။, သူတို့ကလည်းအားလုံးတပြိုင်တည်းသူတို့၏ကယ်တင်၊ဒါကြောင့်ဖို့အခမဲ့ခံစားရချောမွေ့ကိဳးကြားသင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ဖုန်း–ကတစ်လေဂိမ်းတစ်ခုမှအခြား။ မကြိုးစားမှကစားနှစ်ခုထုတ်ကုန်များမှာတခါ:သင်တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်တက်မှုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာမှာတကယ်မဟုတ်ဘဲသင့်ကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်!
ဒါဟာအတော်လေးခက်ခဲလာရန်တက်နှင့်အတူအသစ်အတွေးအခေါ်များအတွက်–အထူးသဖြင့်ကတည်းကအဓိကအယူအဆ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးထဲမှာသော့ခတ်ထားပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာ၊ကျွန်တော်တို့နေဆဲအတော်လေးအနည်းငယ်ဖန်တီးမှုသဘောတရားနှင့်အပေါ်မှာထိုင် ၁၂ ဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူမယ့်ကိုပျော်ရွှင်။ ကျနော်တို့စီစဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၄ သစ်ကိုသူမြား၊ဒါပေမဲ့ဒီတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါလျှင်အလိုရှိ၏။ သတိရတာပဲအစိတ်အပိုင်းအချိန်ယောက်ျားတွေရှိသည်သောအစိတ်အတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းညမ်းဂိမ်း! ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေနိုင်နေတဲ့လူနေမှုလုပ်မယ်ဖြစ်ဖို့ပျော်ရွှင်ထက်ပို။, အထိဖြစ်သွားကြောင်း၊သို့သော်၊ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ရှိသည်သွား trundle ဖြည်းညှင်းစွာတလျှောက်အောင်၊သေချာသောပျမ်းမျှ၏အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြန့်ချိမှာထိန်းသိမ်းထားသည်အမြင့်မားသောအဆင့်။ ဒါဟာရဲ့တန်ဖိုးရှိထွက်ထောက်ပြကြောင်းသူတို့၏၁၂ ဂိမ်းများ၊၃ များမှာအထင်ကခေါင်းစဉ်အကြောင်းကျွန်တော်ပိုပြီးအချိန်ပေးဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သူတို့ကဘယ်နေရာမှာမဆိုယူ ၂ မှ ၅ နာရီမှဖြည့်စွက်အဖြစ်ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်အများအပြားရှိအမှန်တကယ်ဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးချင်တယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာခြေအိတ်အစည်းအဝေးပြီးစီးခြင်းဖွင့်အားလုံး၏အောင်မြင်မှုများ!
တူအစကားပြောကွက်ဖွင့်ထည့်ထားတဲ့ဘေးအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများ၊ငါတို့သည်လည်းတရားဝင်ဖက်ဆာဗာ(၅၊၁၉၅ အဖွဲ့ဝင်များအခုအချိန်မှာ)နှင့်ဖိုရမ်များအရာပတ်လည်ပျမ်းမျှ ၁၀၀ တစ်နေ့လျှင်ပို့စ်များ။ ဆက်သွယ်ပြီးမိုလ်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုပေးကမ်းတကယ့်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းသောအရာ–ငါတို့သည်လည်းအားပေး! ပိုပြီးအကြံဥာဏ်ပေး၊ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းအတွက်လူတိုင်းအတွက်။ တုံ့ပြန်ချက်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အသက်ရှင်သောအတွက်၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးပစ်ပြီးသင့်ရဲ့အကြံအစည်နှင့်ကျနော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါမှကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်းများအပူဆုံးအစက်အပြောက်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကိုယ့်အကြောင်းကိုအားလုံးငါအလိုဆွေးနွေးဖို့ဒီမှာ။ ဂုဏ်စာဖတ်ခြင်းများအတွက်–အခုအတွက်လာနှင့်ကစားမှာကြောက်မက်ဘွယ်သော Doo ညမ်းဂိမ်း! သင်သိရန်ချင်တယ်။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး!